umthetho wabucala | component-xh.com
Iwebhusayithi inelungelo lokutolika imixholo yale ndawo kunye nemixholo yale ndawo kuphela ekusebenziseni kwakho. Umxholo oqulethwe kwilungelo lokushicilela kunye nezinye izaziso zokuthengisa, kuya kufuneka uhlonitshwe kwaye ikopi iya kugcinwa. Ukuba umxholo wesiza ngaphandle kwengxelo elungileyo, oko akuthethi ukuba loo ndawo ayinamalungelo, oko akuthethi ukuba loo ndawo ayibangi amalungelo, kwaye kuya kufuneka uhloniphe umthetho-siseko wokuthembeka kunye nomdla osemthethweni womxholo ukuze usetyenziswe ngokusemthethweni. Awunakho nangayiphi na indlela ukuguqula, ukukopa, ukubonisa esidlangalaleni, ukupapasha okanye ukuhambisa izinto ezinjalo okanye ukuzisebenzisela nayiphi na injongo yoluntu okanye yorhwebo. Ukuthintela nayiphi na kwezi zinto nakweyiphi enye iwebhusayithi okanye enye imithombo yeendaba eprintayo okanye indawo yekhompyuter yenethiwekhi. Umxholo okwisiza kwaye uhlele indlela yokhuselo olusemthethweni ngumthetho welungelo lokushicilela, nakuphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kunokuba lilungelo lokushicilela, uphawu lwentengiso kunye namanye amalungelo asemthethweni. Ukuba awuyamkeli okanye wophule le Migaqo, isigunyaziso sakho sokusebenzisa indawo siza kupheliswa ngokuzenzekelayo kwaye kufuneka uzitshabalalise ngoko nangoko naziphi na izinto ezikhutshelweyo okanye eziprintiweyo.
Ukufumaneka komxholo kule ndawo ngaphandle kwayo nayiphi na indlela yesiqinisekiso. Ngaba akuqinisekisi ukuchaneka ngokupheleleyo kunye nokugqibelela. Indawo kwiimveliso, ubuchwephesha, iinkqubo, amaxabiso kunye nolwabiwo ziya kuxhomekeka kutshintsho ngaphandle kwesaziso. Imixholo yesiza inokuba iphelelwe lixesha, iComponent-en.com. Akukho ukuzibophelela ekuzihlaziyeni. Ukukhutshwa ngolwazi olunikezelweyo kunokuba kwindawo yakho okwangoku akunakuyifumana imveliso, inkqubo okanye inkonzo, unokufaka isicelo kwiComponent-en.com yoQhakamshelwano lweShishini kunye nomhambisi.
3. Ukungeniswa komsebenzisi
Ukongeza kumalungiselelo abucala, ngaphandle kwalawo, uthumela okanye uthumele naziphi na izinto kule ndawo, okanye ulwazi loqhakamshelwano (apha ekuza kubhekiswa kulo njengolwazi) luya kuthathwa njengolungeyomfihlo nolungenabunini. Ukusebenzisa kwakho le ndawo akuyi kwaphula imithetho, imimiselo kunye nokuziphatha koluntu, ungathumeli okanye uthumele ngeposi okanye uthumele nayiphi na into engekho mthethweni, eyoyikisayo, engcolileyo, engcolisayo, engamanyala, yamanyala okanye enye into engekho mthethweni. Ukuba abantu banomxholo wolwazi kunye nefuthe kukho ubungqina besilumkiso okanye isichaso kule ndawo zive ukhululekile ukucima umyalezo okanye ukumiswa okungenamda kolwazi kwisikhangeli seWebhu, ngaphandle kokufumana imvume kwangaphambili, akukho sinyanzelo sokuthumela isaziso, imeko inobuzaza, le ndawo inokususwa kumsebenzisi.
4. Abasebenzisi batshintshisa umxholo
IComponent-en.com Phila ukuze ubeke esweni okanye uphonononge umsebenzisi ukuba athumele okanye athumele imiyalezo okanye anxibelelane kuphela nabanye ngolwazi kuyo nayiphi na indawo yokujongana noxanduva, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumagumbi okuxoxa, iiForam zeComponent-en.com okanye ezinye iiforum zabasebenzisi, nayo nayiphi na ukutshintshiselana ngesiqulatho.Component-en.com Kwisiqulatho salo naluphi na utshintshiselwano aluthathi naluphi na uxanduva, nokuba lukhokelela kunyeliso, imfihlo, amanyala, okanye ezinye iingxaki.Component-en.com igcinwe xa kufunyenwe kucinywa kuthathelwe ingqalelo. njengesiqulatho esihlukumezayo, esinyelisayo, esingamanyala okanye ngenye indlela esingathandekiyo nelungelo lokufumana ulwazi.
5. Indawo yokukhuphela isoftware oyisebenzisayo
Ukuba ukhuphela isoftware ekusebenziseni isoftware ukuthobela isivumelwano selayisensi yesoftware yokuzisa yonke imigaqo yelayisensi yesoftware. Xa ufunda kwaye usamkela isivumelwano sephepha-mvume lesoftware ngaphambi kokuba izibonelelo zinokungakhupheli okanye zifakele isoftware.
6. Ukuqhagamshela kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu
Amakhonkco esiza kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu kuphela njengokulula kuwe. Ukuba usebenzisa la makhonkco, uya kuyishiya indawo.Component-en.com Ayikhange ihlole naziphi na iisayithi zomntu wesithathu, ezi ndawo kunye nemixholo yazo azilawuli, ngaphandle kwetyala. Ukuba uthatha isigqibo sokufikelela nakuphi na amakhonkco kwiindawo zomntu wesithathu, iziphumo ezinokubakho kunye nemingcipheko elawulwa nguwe.
7. Umda woxanduva
IComponent-en.com Kwaye ababoneleli bayo okanye umntu wesithathu okhankanyiweyo akanaxanduva lwayo nayiphi na umonakalo (kubandakanya kodwa kungaphelelwanga kwinzuzo elahlekileyo, idatha elahlekileyo okanye ukuphazamiseka kweshishini okubangelwe ngumonakalo), nokuba loo monakalo usetyenziswa ngokufanelekileyo, okanye awunakho ukusebenzisa IWebhusayithi, kunye nendawo enxibelelana nayo nayiphi na iwebhusayithi okanye naluphi na ulwazi oluqulethwe kwezi ndawo zibangelwe, kwaye nokuba banayo loo khontrakthi, itort okanye nasiphi na isiseko esisemthethweni kwangaphambili kwaye oku kube ngumonakalo onjalo kunokubakho ingcebiso. Ukuba usebenzisa le ndawo ngenxa yolwazi okanye idatha eyimfuneko kulondolozo lwezixhobo, ukulungiswa okanye ukulungiswa, kuya kufuneka wazi ukuba ezabo kufuneka zithwale zonke iindleko ezivela apho.Component-en.com xa kwenzeka ezi meko zilandelayo ngaphandle koxanduva: ukuhanjiswa kolwazi ngumboneleli ngenkonzo yenethiwekhi (IComponent-en.com. Kwaye nomntu ogunyazisiweyo) ngaphandle kwalowo uqalileyo; Ukuhanjiswa kolwazi, ukuhanjiswa, uqhagamshelo kunye nokugcinwa kubonelelwa ngenkqubo eyimfuneko yobuchwephesha, ukhetho lwenethiwekhi; Ukongeza kwezinye iimfuno zempendulo ezenzekelayo, umboneleli wesevisi yenethiwekhi akabakhethi aba banikezeli bolwazi kunye nabamkeli; Inkqubo yabanikezeli beenkonzo zenethiwekhi okanye inethiwekhi yomlamli okanye yokugcina okwethutyana ikopi yolwazi lwefom, phantsi kweemeko eziqhelekileyo, ayinguye umntu ngaphandle komamkeli ekujongwe ukuba afumane ixesha eligciniweyo lingaphezulu komamkeli ekunikezelweni kolwazi kuthumelo lolwazi, ukuhambisa okanye ngokudibanisa ukuya kwixesha elifanelekileyo; ngenkqubo okanye ukuhanjiswa kwenethiwekhi komxholo wolwazi uhambile.
IComponent-en.com inokuguqula la magama nangaliphi na ixesha. Kuya kufuneka utyelele eli phepha ukuze uqonde imigaqo yangoku, kuba le migaqo inxulumene ngokusondeleyo kuwe. Izibonelelo ezithile zala magama zinokubakho kwamanye amaphepha ngezaziso zomthetho ezichongiweyo okanye imigaqo endaweni yayo.